အမေးအဖြေများ | Archibald Tech Co, Ltd မှ
Q1: မီးခံတဲ့အခါငါဂဟေဆော်ဖို့လိုသလား။ ညွှန်ကြားချက်နဲ့လာသလား
A: မီးကိုသင်ရရှိပါကသံမဏိပြားတပ်စရာမလိုပါ၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်စာရွက်စာတန်းများပါရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မီးလုံးအားလုံးသည်လွတ်လပ်စွာတပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Q2: ဦး ဆောင်မှုအချိန်ကော။
A: ၅၀ အောက်အမှာစာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေပေးချေပြီး ၇ ရက်အတွင်းတင်နိုင်ပါသည်။ အမှာ ၁၀၀ ထက်ပိုသောအမှာစာအတွက်ငွေပေးချေပြီး ၁၂ ရက်အတွင်းတင်နိုင်ပါသည်။
A: DHL၊ UPS၊ FedEx သို့မဟုတ် TNT တို့ဖြင့်သာပုံမှန်အားဖြင့်ပို့ဆောင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ရောက်ရှိရန် ၃-၅ ရက်ကြာသည်။ လေမှတစ်ဆင့်သင်္ဘောဖြင့် ၁၅ ရက်ပတ်ပတ်လည်ကြာသည်။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ မင်းရဲ့တံဆိပ်ကို PCB ဘုတ်ပေါ်ပုံနှိပ်ပြီး MOQ မလိုပဲ Heatsink ကိုအခမဲ့ကူးယူနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ LED Grow light ဖြင့်မည်သည့်အပင်များကြီးထွားနိုင်သနည်း။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအပင်များ၊ ဘောလုံးကော့တ်စ်၊ ဘာရိုအမြစ်နှင့်အခြားအရာများ။ မိုးလုံလေလုံစိမ်းလန်းသောဥယျာဉ်ဥယျာဉ်အိမ်နှင့်ရုံးရှိအိမ်တွင်းပျိုးပင်များကိုလည်းအသုံးပြုသည်။
Q6 ။ မင်းကစက်ရုံလားဒါမှမဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။
RE: ကျွန်ုပ်တို့သည် SHENZHEN, China တွင်တည်ရှိပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသောပရော်ဖက်ရှင်နယ် LED မီးစက်စက်ရုံ။
OEM သို့မဟုတ် ODM သို့မဟုတ်ငါတို့၏အထူးဒီဇိုင်းကိုလက်ခံပါသလား။
RE: ဟုတ်ပါတယ်၊ OEM, ODM နှင့်စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်။
Q8 ။ ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုထုပ်ပိုးမလဲ
RE: ကုန်ပစ္စည်းပမာဏ၊ အလေးချိန်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ပစ္စည်းများအပေါ်စဉ်းစားမည်ဆိုပါကအမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ လေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း
Q10 ။ အဖုံးအကျယ်ကဘာလဲ?
Z2 / Z3 640watt အဖုံး 20sqft, 800watt အဖုံး 25sqft, VEG စင်မြင့်အတွက်အနည်းဆုံး6* 6ft ဖုံးနိုင်သည်
Q11 ။ မင်းရဲ့အလင်းတွေဘယ်လောက်မြင့်သလဲ။
ကျနော်တို့ပန်းပွင့်များအတွက်မြတ်သောထံမှ 6+ လက်မကွာအကြံပြုအပ်ပါသည်။ veg သို့မဟုတ် clone အဘို့, 30+ လက်မကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်အကွာအဝေးကိုချိန်ညှိခြင်းထက်သင့်လျော်သောပြင်းထန်မှုမှအလင်းအိမ်မှေးမှိန်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင့်ကနေကွဲပြားခြားနားသော ppfd အဆင့်ဆင့်ပြသထားတယ်။
Q12 ။ သင့်ဆီမီးခွက်ရဲ့ output ကဘာလဲ? ဆီမီးခွက်သည်အပင်ဘယ်နှစ်လုံးကျန်ပါသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံမှအချို့သောအချက်အလက်များအရ ၁.၆-၂.၂.၂ ဂရမ် / ဝပ်နှုန်းရှိလိမ့်မည်၊ ၎င်းမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဒြပ်စင်များနှင့်မတူကွဲပြားသောမျိုးကွဲများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤတွင်အထွက်နှုန်း၏တုံ့ပြန်ချက်အချို့ကို။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆင့်၊ အပင် ၈-၁၀ နှင့်ပန်း ၅-၆ အပင်အတွက်။ စက်ရုံအရွယ်အစားပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။
Q13 ။ ဘာကြောင့်မင်းရဲ့စျေးနှုန်းကတခြားလူတွေထက်မြင့်တာလဲ
၁။ Nalite သည် Samsung ကုမ္ပဏီနှင့်မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်များထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကစီရင်စုပေးသွင်းရှိသည်
၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏လ်တာတစ်ခုလုံးသည်အတည်ပြုခြင်း ETL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ cETL ဖြစ်သည်။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့၏မူပိုင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိသည်၊ ၁၀% ppfd တိုးနိုင်သည်။
4.We အမှတ်တံဆိပ်ကြီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ရှိသည် (Fluence, Gavita)
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းသည်ဈေးကွက်တွင် ပို၍ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်
Q14 ။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်ပန်းပွင့်ကာလ၌အသုံးပြုသည် 3000K ဖြစ်နိုင်မည်နည်း
၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလင်းများသည်အပြည့်အ ၀ ရောင်စဉ်ဖြစ်ပြီး ၃၅၀၀k + 660nm ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 3000k နှင့်ညီသည်။ ပန်းပွင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကူညီရန်အနီရောင်အလင်းအလုံအလောက်ရှိသည်။ ဤအပြည့်အဝရောင်စဉ်သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပန်းပွင့်ကြီးထွားမှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ စိတ်ကြိုက်ပုံစံအသစ်အတွက်ငွေဖြုန်းရန်သင့်အားအကြံပေးမည်မဟုတ်ပါ။
၂။ MOQ သည်သင်စိတ်ကြိုက်ရောင်စဉ်ကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်လျှင် 50pcs ဖြစ်သည်။
Q15 ။ ချိန်ညှိရောင်စဉ်?
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အလင်းရောင်စဉ်၊ ၃၅၀၀K + 660nm၊ အပြည့်အဝသံသရာကြီးထွားမှုအတွက်သင့်တော်သောရောင်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ရောင်စဉ်ကိုချိန်ညှိရန်မလိုအပ်ပါ။
spectrum tunable လုပ်ရန်လိုအပ်လျှင်အနည်းဆုံးအုပ်စု ၂ စုပါသော color chips လိုအပ်လိမ့်မည်။ ခြားနားချက်ရောင်စဉ်ကိုလှည့်သောအခါအချို့သောအရောင်ချစ်ပ်များသည်စွမ်းအားအလုံအလောက်မရရှိပါ။ ဤအချိန်တွင် PPFD သည်မလုံလောက်ပါ။
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူသည်ရောင်စဉ်တန်းစီ။ လည်ပတ်ချိန်တွင်ကောင်းမွန်သောရောင်စဉ်တန်းရရှိရန်စံသတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ အကယ်၍ နောက်ဆုံးရောင်စဉ်မဖြည့်ပါကသင်၏အပင်များကိုထိခိုက်လိမ့်မည်။
Q16 ။ ထုတ်ကုန်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်လို့ရမလား။ စိတ်တိုင်းကျလိုဂိုနှင့်ထုံးစံပုံး
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အတွက်စက်ရုံလုပ်နိုင်သည့်စက်ရုံဖြစ်သည်။ ပြproblemနာမရှိသော်လည်း MOQ နှင့် ၁ USD / pcs လိုဂိုများရှိသည်။